MORAMANGA : LEHILAHY NIVOAKA NY FONJA NY TALATA NO NAMERIN-KELOKA NY ALAROBIALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYMORAMANGA : LEHILAHY NIVOAKA NY FONJA NY TALATA NO NAMERIN-KELOKA NY ALAROBIA
MORAMANGA : LEHILAHY NIVOAKA NY FONJA NY TALATA NO NAMERIN-KELOKA NY ALAROBIA
Tra-tehaka teo am-pangalarana “autoradio”-n’olona ilay lehilahy voalaza fa gadra vao avy nisazy, tany Moramanga, afak’omaly. Nihitsoka tsy nety nivoha ilay fiara tsy mataho-dàlana izay nidirany an-tsokosoko ka noraisim-potsiny izy
Tànana zatra mitsotra tsy afaka mivonkina intsony. Lehilahy vao nivoaka ny figadrana ny talata no tratra ambodiomby niditra an-tsokosoko tao anaty fiarakodian’olona ary nanendaka ny “auto radio”, afak’omaly, tao Moramanga. Tsy tanteraka hatramin’ny farany anefa ilay fikasan-dratsiny ka dia tra-tehaky ny tompon’ny fiara izy.
“Raha tara segondra vitsy aho dia efa tafaporitsaka nivoaka izy. Efa vitany ny nanendaka ilay “autoradio” saingy mbola nikononkonona nitady hevitra ny hanitrihana izany tany anaty ankanjony izy no sady nitady paikady hivoahana”, araka ny fitantaran’ny tompon’ilay fiara vaky.
Fiara tsy mataho-dàlana niantsona teny amoron’arabe moa ity lasibatra ity. Nosintoniny ny varavarana izay tsikariny fa tsy nihidy ka niditra izy ary nendahiny ny “autoradio”-n’ilay fiara. Vao nikasa ny hivoaka anefa izy dia nihidy mafy tsy nety novohaina intsony ny varavaran’ilay fiara tsy mataho-dàlana. Nanazava moa ny tompon’ilay fiara fa voabaiko avy lavitra ilay fiarakodia ka izay no nampihitsoka ilay mpangalatra tao anatiny.
Niantso mpitandro ny filaminana avy hatrany moa ny tompon’ilay fiara. Rehefa avy nanaovan’ireo Polisy fanadihadiana fohy nanoloana ireo olona nitangorona ity lehilahy ity dia fantatra fa mpamerik’heloka ary vao ny omalin’io andro io izy no avy nisazy, tao amin’ny fonjan’i Moramanga ihany.
Ny fanomanana ireo voafonja mialohan’ny hivoahany ny figadrana moa no isan’ny nampihitatra ny resaka tao an-tampon-tanànan’i Moramanga tamin’io fotoana io. Tsy voalohany mantsy izao no nahatrarana gadra mameri-keloka, saingy isan’ireo haingana indrindra tamin’ity fanaovan-dratsy ity ilay gadra afaka tao Moramanga. Marihina anefa fa fandaharan’asa maro, ankoatra ireo hetsika kristiana, no milaza ho miasa ho amin’ny famerenana ireo voafonja hiverina eny anivon’ny fiarahamonina saingy raha ho an’ity lehilahy ity dia nandamoka izany.
Partager la publication "MORAMANGA : LEHILAHY NIVOAKA NY FONJA NY TALATA NO NAMERIN-KELOKA NY ALAROBIA"
jual perabot murah 12/11/2018 at 09:22 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 10:44 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 11:34 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 15:02 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 15:48 Repondre
jual perabot murah 12/11/2018 at 16:58 Repondre